Mampitaha ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena ny Corps Electrónico Dirigido
Namorona fifandraisana amin'ny mpividy dia tena tsara ny hevitra mba hanombohana ny fampiasana elektrônika. Ny fomba fiasa izay nanamora ny fampiasana ny fifandraisana dia ny marketing amin'ny alalan'ny elektronika. Fahadisoana ratsy, tsy misy mpividy rehetra manerantany. Ao amin'ny governemanta ao an-trano, manapa-kevitra ny hampiasa ny fitaovana elektronika entina hanaparitahana ny mpanjifa, fa tsy ny fampiharana ny tolotra - paracas adventure tours. (Nitranga in-1):
Raha ny vokatra, ny marketing avy amin'ny elektronika dia tsy ampy fitaovana ho an'ny mpanjifa. Amin'ny fampiroboroboana ny varotra elektronika, ny tetika ara-pahasalamana dia tsy ampiasaina. Amin'ny lafiny iray, ny fampiroboroboana ny fampiasana ny tenimiafina dia manimba ny fahatsapana faobe amin'ny mpanjifa mba hahazoana ny fepetra ilaina. Ny antony dia ny fampiasana ny fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa maro, ny teknolojia fanangonan-tsonia manokana dia afaka manangana sary marika iray amin'ny endrika ny mpanjifa mifampizara amin'ny votoatiny.
El Gerente Senior de Ventas de Semalt , Ryan Johnson, profundizo en el principio de especialmente de marketing de correo electrónico dirigido.
Manampy amin'ny sehatra fampiroboroboana ny varotra ara-tsosialy, ny fanaraha-maso ny tetik'asa ara-barotra:
Toy izao ny fomba haingana na vao haingana ny mpanjifa dia mifandray amin'ny mailaka. Azonao aseho anao izany ny lamina ary ny fotoana handefasana mailaka toy ny hoe "malahelo anao".
Customer vs. Perspectives
Izany no fahasamihafana misy eo amin'ny zavatra vidin'ny olona sasany sy ny zavatra antenainy. Ohatra,Ny mpividy PS4 dia manantena ny fanavaozana ao amin'ny lalao vao haingana.
Anisan'ny raiamandreny ny fanandramana amin'ny mpanjifa dia mifandray amin'ny elektronika. Ny tena mahavariana dia ny fotoana sy ny fotoana dia manolotra karazana "te extrañamos".
Io no diferencia eo amin'ny algunas ny olona manazava sy ny zava-mitranga. Amin'ny maha-mpampiasa azy, ny PS4 dia manaparitaka ny vaovao sy ny mpankafy.
Rehefa mihazakazaka ny orinasa any an-toerana, dia zava-dehibe foana ny mampitombo ny teknolojia SEO anaoho an'ny niche mila anao. Izany dia ahafahanao mampifanaraka kokoa ny dokam-barotra momba anao. Ny fivarotana eo an-toerana dia afaka mampiasa ny Google Maps, izay manampy koaNy mpanjifany dia manome ny votoatin'ny vohikala amin'ny aterineto.
Samy hafa amin'ny lehilahy ny lehilahy sy ny vehivavy. Misy antony maro samihafa mety hitrangaNa ny iray amin'izy ireo dia manaiky ny hividy. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mora kokoa ny mahita vehivavy eo amin'ny tranokala maro toy ny ankamaroan'ny lehilahy mividy fivarotana. Toy izany koa, samy manana fahazaran-dratsiny amin'ny olona samy hafa ny olona. Ohatra, ny mpianatra dia tsy hanao safidy mitovy amin'ny afovoanyfotoam-pianarana. Ilaina ny fananganana demografika mba hamoronana dokam-barotra sy fanentanana mailaka.
3. Fotoana sy fotoana ilaina:
Ny fotoan'ny herinandro na andro dia misy fiantraikany amin'ny fotoana fohy. Ohatra, mailaka amin'ny herinandroNy fampielezan-kevitra dia tsy tokony ho sahala amin'ny fanentanana mailaka alatsinainy. Ny karazana niches dia samy manana ny fomba amam-panao amin'ny votoatin'ny tranonkala.
Izany fitaovana izany dia an'ny Google AdWords. Izany no mahatonga ireo orinasa mpividy toy izany amin'ny alàlan'ny famoahana azylisitry ny mpanjifanao misy anao ary mahazo mpihaino vaovao. Ny fitaovana dia afaka mitondra endri-pandehan'ny tanjona nify vitsivitsy izay tena ilainaho an'ny SEO sy ny mailaka marketing.
Ny dokam-barotra mailaka dia fomba iray manan-danja hanatrarana ny mpitsidika tranokala iray. Amin'ny ankamaroanyIreo tranga, ny teknikam-pamokarana mailaka dia mampiasa fomba amam-panazavana amin'ny fandefasana mailaka amin'ny rehetra. Ny fanaovana ny mailaka manokana sy miavaka amin'ny mpanjifa diairay amin'ireo fomba hahombiazana amin'ity dingana ity. Ireo tombontsoa SEO hafa izay avy amin'ny segmentation ara-barotra mailaka dia midika hoe famerenana mivantana ary.